२४० स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक : कहिले आउँछ चार महानगरको अन्तिम नतिजा ? - Ratopati
२४० स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक : कहिले आउँछ चार महानगरको अन्तिम नतिजा ?
काठमाडौ, जेठ ५ – तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानमा गत आईतबार सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ औ दिन शुक्रबार बिहानसम्म २८३ मध्ये दुईमा निर्विरोध भएबाहेक २ सय ८१ स्थानमा चुनाव भएकोमा २४० स्थानको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म कसले कति जिते ?
जसमा एमालेले ९७ तहको प्रमुख पदमा विजयी हासिल गरिसकेको छ भने दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसले ९४ र तेस्रोमा माओवादी केन्द्रले ४४ तहको स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा विजयी हासिल गरेको छ । त्यस्तै राप्रपा, जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले समान एकएक पद जितेका छन् भने स्वतन्त्रका उम्मेदवरले तीन पद हात पारेका छन् ।
यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने शुक्रबार विहान १० बजेसम्म एक सय ६१ स्थानको मात्र नतिजा आएको जनाएको छ । संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेइओसी) को हवाला दिदै आयोगले शुक्रबार बिहान १० बजेसम्ममा १६१ स्थानीय तहको मतगणना कार्य समाप्त भई उम्मेदवारहरूको विवरण प्राप्त भएको जनाएको हो । आयोगको विवरण अनुसार, नगरप्रमुख वा अध्यक्ष १६१, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख १६१, वडाध्यक्ष १ हजार ३२२, वडा सदस्य २ हजार १९२, महिला सदस्य १ हजार ९५ र दलित महिला सदस्य १ हजार ३० निर्वाचित भइसकेका छन् ।
कति निर्वाचित हुँदैछन् ?
पहिलो चरणमा २८३ प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित तीनवटै प्रदेशमा १३ हजार ५ सय ५६ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुदैछन् । त्यति जनप्रतिनिधि निर्वाचित हन ४९ हजार तीनसय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिश्पर्धामा उत्रिएका थिए । तीमध्ये ६१ प्रतिशत पुरुष र ३९ प्रतिशत महिला उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए ।
आयोगको प्रतिवद्धता पुरा नहुने संकेत
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक साताभित्र मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने दावी गरेपनि उसले तोकेको समयसिमामा भने सवै तहको मतपरिणाम नआउने निश्चित भएको छ । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार बाँकी स्थानको मतगणना पनि तीव्र भएकाले चार महानगरबाहेक अन्य स्थानको मतपरिणाम भोली अर्थात शनिबारसम्म सकिसक्ने छ ।
प्रवक्ता शर्माले सोमबारसम्म चार महानगरको पनि परिणाम सार्वजनिक गर्नेगरी गणना भइरहेको जनाए । चार महानगरमा अन्य स्थानको तुलनामा मतदता धेरै र उम्मेदवरसमेत बढि हुनु तथा त्यसका कारण मतपत्र ठुलो भएकाले मत गणना गर्न कठिन भएको शर्माको भनाई छ ।
बदर मत २ प्रतिशत मात्रै
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा अभावमा धेरै मत बदर भएको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरेको छ ।‘अहिल्यै केहि स्थानको केही मत बदर भयो भन्दैमा त्यसैलाई आधार बनाएर धेरै मत बदर भयो भनेर प्रचार प्रसार गरिएको छ त्यसरी विश्लेषण गर्नु गलत हुनेछ । ’ प्रवक्ता शर्माले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा २ प्रतिशत मात्र मत बदर भएको पाइएको छ ।
चार महानगरको सोमबारसम्म आइसक्ने
काठमाडौँ महानगरसहित काठमाडौका सात नगरको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ भने ललितपुर महानगरमा एक नगर र भक्तपुरका चार नगरपालिकाको मतपरिणाम पनि आउन बाँकी नै रहेको छ ।
उता, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकासहित चारवटा नगरको परिणाम आउन बाँकी छ भने पोखरा लेखनाथ महानगरसहित अन्य केही स्थानीय तहको पनि परिणाम आउन केही समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं, जेठ ११– वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको म..
काठमाडौँ, जेठ ११ – काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब आठ वटा वडाको मात्र मतपरिणाम आउन बाँकी रहँदा नेकपा(एमाले) को अग्र..
काठमाडौँ, जेठ ११ गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट हालसम्मको मत परिणामानुसार १२ हजार ९६४ प्रतिनिध..
काठमाडौँ, जेठ ११ – काठमाडौँ महानगरपालिकामा एक लाख ५३ हजार ३९६ मत गणना हुँदा प्रमुखमा नेकपा (एमाले) का विद्यासु..
दमक, जेठ ११– दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रले झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका र..
झापा, ११ जेठ । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहको दोस्रो चारणको निर्वाचनका लागि चारवटा तहमा सर्वसम्मत उम्मेदवार चय..
भक्तपुर, ११ जेठ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुले आज शपथ ..
काठमाडौँ, ११ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं ७, २१ र ३१ वडाध्यक्ष र सदस्यमा नेकपा (एमाले)ले कै समूह विजयी..